ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲက တရုတ်နိုင်ငံ၏ စပ်မျိုးစပါးသိပ္ပံပညာရှင် ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် မိသားစုဝင်များအား ဝမ်းနည်းကြောင်း ဖော်ပြ - Xinhua News Agency
ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲက တရုတ်နိုင်ငံ၏ စပ်မျိုးစပါးသိပ္ပံပညာရှင် ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် မိသားစုဝင်များအား ဝမ်းနည်းကြောင်း ဖော်ပြ
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်က စပ်မျိုးစပါးအတွက် တီထွင်ဖန်တီးခဲ့သူ တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင် Yuan Longping ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် မိသားစုနှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်းကြောင်း မေ ၂၄ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပညာရှင် Yuan အား ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၎င်းသည် လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်က ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။Yuan ကွယ်လွန်သွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မှတ်ချက်စကားကို သိလိုကြောင်း ဂူတာရက်စ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Stephane Dujarric အားမေးမြန်းစဉ် “ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာက ကုလသမဂ္ဂစနစ်ထဲကနေ အခြားသူတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လက်တွဲပြီး Yuan ရဲ့ မိသားစုဝင်အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်၊ပြီးတော့ ပါမောက္ခ Yuan ဟာ သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး လူသား ကုဋေကဋာပေါင်းများစွာအတွက် အစားအသောက်ဖူလုံအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဟာ သိပ်ကိုအရေးပါတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်မို့ ဂုဏ်ပြုပါတယ် ” ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ “ စပ်မျိုးစပါးဖခင်ကြီး” Yuan Longping အား ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်က တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ် Changsha မြို့ရှိ စပါးခင်းတစ်ခု၌ တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
“ အစားအစာ ဖူလုံရေးဟာ အရေးပါတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုပါ ၊ ကမ္ဘာ့အရေးထဲမှာ ထိပ်တန်းက တည်ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ၊ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်ပြုသင့်ပါတယ် ” ဟု Dujarric က ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအကယ်ဒမီမှ ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Yuan သည် ဆယ်စုနှစ် ငါးခုကျော်ကြာအောင် စပ်မျိုးစပါးသုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် အချိန်ပေး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယင်းသုတေသနလုပ်ငန်းက ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ငါးပုံတစ်ပုံ ၊ ကမ္ဘာ့စိုက်ပျိုးမြေစုစုပေါင်းအားလုံး၏ ၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လွှမ်းခြုံနိုင်အောင် အကျိုးပြုခဲ့ရာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အံ့မခန်း လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် ၎င်းက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Yuan သည် ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး စပ်မျိုးစပါး မျိုးစိပ်သစ်ကို တီထွင်၍ အောင်မြင်စွာ စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်စပါးအထွက်နှုန်း ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းစပါးမျိုးစိပ်ကို တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံများစွာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ဆယ်စုနှစ် လေးခုကြာ Yuan သည် စပ်စပါးမျိုး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း နှင့် သုတေသနပြုခြင်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ ၎င်း၏ တတိယမျိုးဆက် စပါးမျိုးစိပ်အထိ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
UNITED NATIONS, May 24 (Xinhua) — UN Secretary-General Antonio Guterres on Monday offered his condolences to the family of Yuan Longping,arenowned Chinese scientist for hybrid rice.
Asked about the secretary-general’s comment on the passing of Yuan, Stephane Dujarric, spokesman for Guterres, said: “I can tell you that we join others from the UN system who have expressed our condolences to his family and also honor the momentous work that Professor Yuan did throughout his life, which helped billions and billions of people improve their food security.”
“Food security is an issue that remains on top of the global agenda. We all should be honoring his work,” said Dujarric.
Having spent over five decades in hybrid rice research, Yuan, an academician with the Chinese Academy of Engineering, had helped China workagreat wonder — feeding nearly one-fifth of the world’s population with less than9percent of the world’s total land.
Yuan succeeded in cultivating the world’s first high-yielding hybrid rice strain in 1973, which was later grown onalarge scale in China and other countries to substantially raise output. For the next four decades, he continued to research and upgrade hybrid rice, which has reached its third generation. Enditem
(1)People bid farewell to deceased scientist Yuan Longping at the Mingyangshan funeral parlor in Changsha, central China’s Hunan Province, May 24, 2021. (Xinhua/Xue Yuge)
(2) China’s “Father of Hybrid Rice” Yuan Longping receives an interview at an experimental field of “giant” rice in Jinjing Township of Changsha County, central China’s Hunan Province, Oct. 16, 2017. (Xinhua/Li Ga)
Yaasဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်ကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင် မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုလံပစ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ က ဘောလုံးအားကစားသည် မိမိတို့အားလုံး အမေှာင်ထု မှ ထွက်ခွာချိန် ပထမ အလင်းတန်းဖြစ်စေကြောင်း ပြောကြား